Lazio ayaa 3-0 ku garaacday kooxda ay dariska yihiin ee AS Roma ciyaar xiiso badan oo ka dhacday Stadio Olimpico iyadoo Lazio ay gaartay guusheedii afaraad oo isku xigta.
Ciyaarta ayaa aheyd mid hal dhinac ah iyadoo Lazio ay maamushay min bilow ilaa dhamaad, iyadoo Manuel Lazzari uu ciqaabay daafacyada Roma, gool uu dhaliyay Ciro Immobile iyo joogitaanka Luis Alberto oo xaqiijisatay guushii 3-0.
Kulankaan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee Derby della Capitale ee la ciyaaro habeenka jimcaha, laakiin sidoo kale wuxuu ahaa mid albaabadu u xiran yihiin xanuun dartiis darteed.
Lazio ayaa ku bilaabatay qaab duulaan ah waxayna hogaanka qabatay markii Roger Ibanez uu kubbada ku garaacay shabaqa gadaashiisa, wuxuuna kala soo baxay Manuel Lazzari oo ku jira sanduuqa wuxuuna dhigay Ciro Immobile.
Lazzari ayaa sidoo kale ka shaqeeyay goolkii labaad ee sahlan ee Luis Alberto iyada oo Roma ay ka cadhootay go’aanka garsooraha iyaga oo ku doodaya in Lazzari uu taabtay kubbada ka hor goolka.
Xiddiga Premier League oo isbedelay
Nemanja Matic ayaa shaaca ka qaaday xiddiga Manchester United
Laakiin Lazio ayaa maamulka ciyaarta la wareegtay waxayna heshay goolkeedii saddexaad markii uu Lazzari la shaqeeyay badalkii Jean-Daniel Akpa Akpro wuxuuna kubbada ku baasay banaanka shabaqa Luis Alberto.
Guushan ayaa dhigeysa Lazio oo ku jirta kaalinta todobaad iyadoo leh 31 dhibcood, waxayna seddex ka hooseysaa kooxda kaalinta seddexaad ee Roma.
Aktarada Lazio Anna Falchi ayaa balan qaaday kahor kulanka inay soo bandhigi doonto sawir qaawan oo ay soo dhigeyso baraha bulshada hadii Lazio ay garaacdo AS Roma.
Isla markii ay ciyaartu dhammaatay, taageerayaal badan oo Serie A ah, oo u badan Lazio, ayaa aadey Twitter iyo Instagram iyaga oo ka dalbanaya in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii.
Lama oga waqtigaan waxa uu sameyn doono marka uu shaqada ka tago.
applicants who’ve lodged a grievance are existing